MMASTROLOGY | Conscious of Electional & Horary MaHaBote: ေဗဒင်​ေမး​မယ်
ေဗဒင် ဆိုင်ရာ အြကံြပုချက် ရယူလိုပါက
အမည် ၊​ေမွး​သက္ကရာဇ်၊​ေမး​ချိန်တွင် ဝတ်ဆင်ထား​ေသာ အဝတ်အစား​အ​ေရာင်၊​ေမး​လို​ေသာ ေမး​ခွန်း​တို့​အား​ေဖာ်ြပြပီး​ဆရာ​ေတး​ေအး​ရိပ် ထံသို့​ေအာက်​ေဖာ်ြပပါ အီး​ေမး​လ် သို့​ေပး​ပို့​ရယူနိုင်ပါြပီ။
ဉာဏ်ပူ​ေဇာ်​ေြကး​အ​ေနြဖင့်​ေမး​ခွန်း​တစ်ခွန်း​- £ 10.00 (~Approx S$ 20.7)
ရင်​ေသွး​အမည်​ေပး​- ြမန်မာအမည် - £10.00
ရင်​ေသွး​အမည်​ေပး​- အဂင်္​လိပ်အမည် - £ 20.00 (English first name only, e.g Bryan ြဖိုး​လျှံ, Elicia ဖူး​ငံု)
-------------------------------------- အထူး​အစီအစဉ် - Value for Money Service
ြမန်မာြပည်တွင်း၌ ေမွးဖွားသည့် ရင်ေသွးများအတွက် အမည်ေပးြခင်းကို ြမန်မာေငွ ၁၂၀၀၀ ကျပ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးေနပါြပီ။
ေငွလွှဲရန်အတွက် ဘဏ်အမည် , ဘဏ်စာရင်းအမည်, ဘဏ်ခွဲအမည် တုိ့အား စာမျက်နှာ ေအာက်နားတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်
ေငွလွှဲရာတွင် Reference နံပါတ်ကို ဘဏ်မှ ရယူပါ။ ၎င်း Reference နံပါတ်အား ေဖာ်ြပြပီး ရင်ေသွးအမည်ေပး အတွက် E-mail မှတစ်ဆင့် ေမးြမန်းနုိင်ပါြပီ
ြမန်မာြပည်မှ လွှဲသူများ ေငွေပးသွင်းြပီးသည့် အေထာက်အထားပါသည့် ေငွလွှဲစာရွက်အား (ဘဏ် စည်းတံဆိပ်ထုြပီး )စကင်ဖတ်ြပီး ေပးပို့ပါ။ အီးေမးလ်ရရှိြပီး (၁) ရက်မှ (၃) ရက်အတွင်း အေြကာင်းြပန်ြကားေပးပါမည်။
E-mail - service@mmastrology.com
အမည်ေပးအတွက် E-mail ြဖင့်သာ ေြဖြကားေပးပါမည်။
အမည်ေပးရာတွင် - ရင်ေသွးအတွက် လုိအပ်သည့် အမည်ေပးြခင်းကိုသာလှျင် ေဖာ်ြပပါမည် ။ အြခားေသာ စရိုက်အဟာများ၊ အြကံေပးချက်များ မပါ၀င်ပါ။
E-mail ြဖင့် အေြကာင်းြပန်ြကားေပးမည် ြဖစ်သြဖင့် အိမ်အေရာက် မပို့ေပးပါ။ -----------------------------------------------------
g-talk2g-talk အထူး​အတိုင်ပင်ခံ အတွက်လည်း​သင့်​ေလျာ်​ေသာနှံုး​ထား​ြဖင့်​ေဆာင်ရွက်​ေပး​ေနပါြပီ
please keep your paypal notification receipt asaproof of payment
If you bank with KBZ & AGD bank , you can now settle our service fee by bank transfer.
Bank Name : KBZ BANK (Kanbawza bank Ltd)
A/c Name : MMASTROLOGY Branch : 12-008 (TGG) Saving Ac # : 027-121-0127593
Bank Name :AGD BANK (Asia Green Development Bank Ltd)
A/c Name : MMASTROLOGY
Branch : 001-002 (LMD)
Saving Ac # : 304-121-0042560
x x x UK customers, please pay to Santander Account For security reason , will email upon when you request.
x x x x Other countries, please use PAYPAL
One of our top priorities is making sure that the information we have about you is protected and secure. We value our relationship with you and work hard to preserve your privacy. At the same time, the very nature of our relationship may result in us collecting or sharing certain types of information about you.
We collect personal information to allow us to personalize Astrology reports. We regard all personal information - including birth data - as completely confidential, and refuse to divulge your information to any third party.
The giving of information to other companies mmastrology DOES NOT sell or disclose individually identifiable information obtained about our customers to anyone outside of mmastrology. The only exceptions to this rule are the following: It is required by law and when we believe that disclosure is necessary to protect our rights and/or to comply withajudicial proceeding, court order, or legal process served on our Web site Disclosure is necessary to protect the safety of customers or employees
Training and work experience purpose.